गफ ! .....: 2011
कविता : एकजोर गुलाबी चप्पल
तस्वीर गूगलको सापट
एकदिन फेदैको खुड्किलामा
एकजोर गुलाबी चप्पल फुकालेर
भर्याङ्ग उक्लिएर माथी चढेथ्यौ तिमी
फर्किएर फेरि कहिल्यै
आफ्नो चप्पल लिन आएनौ
भर्याङ्ग चढेर माथी गए
भर्याङ्ग ओर्लेर तल झरे
फुकालिए भर्याङ्गको फेदमा
लगाईए भर्याङ्गको फेदबाट
सबैको हर हिसाब
सायदै कसैले राख्यो
नराखेरै तर मसँग
रहेको छ हिसाब
तिमीले फुकालेर छोडेको
एकजोर गुलाबी चप्पलको
आउँदा जाँदा देख्नेहरु
सबैले बेवारिस ठान्छन्
सबैले अनाथ भन्छन्
तिम्रो एकजोर गुलाबी चप्पललाई
तिमीले फुकालेर छाडेपनि
आजसम्म मैले ख्याल राखेको
तिम्रो एकजोर गुलाबी चप्पल
कसरी बेवारिस हुन सक्छ?
कसरी अनाथ हुन सक्छ?
Posted by दीपक जडित at 6:09 AM7comments: Links to this post
गजल : धूलोमा खोज्नु मलाई
मनग्गे छु धूलोमा खोज्नु मलाई ।
काँतर म दुलोमा खोज्नु मलाई ।
जब भाग नै लगाई सक्यौ भने,
सबै भन्दा ठुलोमा खोज्नु मलाई ।
म दुर्लभ साथै महङ्गो पनि छु,
भेट्छौ तर तुलोमा खोज्नु मलाई ।
सम्बन्ध नै भए खोजीको आधार,
हुन्छु म खुकुलोमा खोज्नु मलाई ।
बल्दिंन; तर खोजी दीपकै भए,
Posted by दीपक जडित at 5:51 AM3comments: Links to this post
गीत : आजै नगर
यो मिलन वर्षौंपछि भएको छ
विछोडिने कुरा तिमी आजै नगर
फेरी अर्को सिंगै यूग मलाई
तड्पाएर राख्ने कुरा राजै नगर ।
यो खुसीमा छल्किएका आँसुहरु नझरी नै
पिरतीमा खापिएका कति कुरा नगरी नै
कुल्चेर रहर यि सबै
फर्किजाने कुरा तिमी ताजै नगर
यो मिलन वर्षौं पछि भएको छ....... ।
प्रहर धेरै यो रातको कटाउन बाँकी छोडी
आँखाको यो पर्दा लाजको हटाउन बाँकी छोडी
कालो रात ओढेर एक्लै
निदाउने कुरा तिमी सम्साँझै नगर
निक्कै अगाडी देखि यो गीत फेसबुकको नोटमा ड्राफ्ट बनेर बसेको रहेछ । अचेल कलम नचलेर न फेसबुकको नोट न ब्लग कतैपनि रचनात्मक उपस्थिती नभैरहेको बेला यो गीत भेटेर राहत महसुस मात्र गरिंन कि फेसबुकको नोट र यहाँ ब्लगमा समेत एकैपटक राखिदिएँ । कास् यसरी नै कुनाकानी दिनदिनै केहि न केहि भेटिदों हो त!
Posted by दीपक जडित at 12:21 AM2comments: Links to this post
गजल : मानो चामल बोकेर आए
कोहि मिती र समय तोकेर आए ।
कोहि अचानक तर खोकेर आए ।
जो ठान्थे निषेध छ तिन्लाई प्रवेश,
बिरालोको चालमा श्वास रोकेर आए ।
सानो खुसीमै आँखा तर्दै हिंड्नेहरु,
बिजोग हेर्न चैं जिब्रो टोकेर आए ।
तमाशा चल्छ मानौं केहि दिनसम्म,
कोहि त दैलोमै ताल्चा ठोकेर आए ।
भोकै बाँच्थ्यो त्यो मर्यो भोकले नै जब,
छिमेकी मानो चामल बोकेर आए ।
Posted by दीपक जडित at 7:07 PM3comments: Links to this post
कविता : मेरो आदिम गीत
स्केच गूगलको सापट हो
जे पनि लेखिन सक्थ्यो
थियो एक थान
जे पनि लेख्न सक्थ्यो
थिएन लेख्ने कोहि
पर पर सम्म
पृथ्वीको एक कुनामा
नकोरिएरै रचिएको छ
प्रकृतिकै खुल्ला पन्नामा
नलेखिएरै गाइएको छ
प्रकृतिकै अनमोल छटामा
बनेको छ आज
मेरो आदिम गीत ।
साउथ किहे, हवाई
Posted by दीपक जडित at 4:31 PM 1 comment: Links to this post
गजल : सलाम ति आँखालाई
चढाईदिन्छु एउटा सलाम ति आँखालाई ।
मेरो नाम नजोडिंदै बदनाम ति आँखालाई ।
देख्दा सामु बिझाउने समय थियो या म थें,
टाढा छु होला अब त आराम ति आँखालाई ।
भक्त बनाई दुनियाँ नचाउने सपना जस्को,
आँसु चढाउने यो मन के काम ति आँखालाई ।
अइना(ऐना)मा शृंगार हेर्दा आफुलाई नदेख्ने,
प्यारो अवश्य लाग्ला छलछाम ति आँखालाई ।
आफैंलाई तारा ठानेर टल्किरहेछ एक्लै,
कतिन्जेल देखाईरहन्छौ जुनघाम ति आँखालाई ।
Posted by दीपक जडित at 10:35 AM4comments: Links to this post
मुक्तक र म
जाई फुलेन जीवनमा
बैंश फक्रेर खेला भो
धेरै पछि जाँगर चल्यो ब्लगमा केहि लेख्ने ।
तर के लेख्ने?
आफैं आफ्नै नजरमा धेरै सम्म बेपत्ता भएर आफुलाई भेट्दा पनि आफैंलाई उदेक लाग्दोरहेछ । अरु त अरु ब्लगमा के लेख्ने होला है? भन्ने नै चिन्ता परेपछि पो अत्यास लाग्यो । नियमित लेख्दै आईरहेको भए केहि न केहि खुराक अवश्य बन्ने थियो । तर अन्तराल पछि के लाई खुराक बनाउने? केहि न केहि त अवश्य बनाउनु पर्छ । घोत्लिएँ र खोज्नथालें अन्तराल पछि ब्लगमा राख्न उपयुक्त सर्जाम । र फेला पर्यो 'रेला' शिर्षक राखेर मुक्तक भन्दै धेरै अघि लेखेको लघुत्तम कविता । यसलाई मुक्तक भन्न मिल्थ्यो मिल्दैनथ्यो त्यो त मुक्तकका मर्मज्ञ पाठकहरुलाई थाहा हुन्छ । 'रेला'ले सम्झायो कि पहिले पहिले मलाई पनि मुक्तके भूत निक्कै चढेको थियो र खुबै लेखिहिंड्थें । त्यसबेला लेखेका सबै टुक्राहरु मुक्तक थिएनन् होला किनकि नयाँ वर्ष वा अन्य त्यस्तै अवसरमा पोष्टकार्डका पछिल्तिर त्यस्ता टुक्राहरु लेख्दै साथीहरुलाई दिइन्थ्यो । मैले त्यस्ता टुक्राहरु संकलन गरेर राखेको पनि थिएँ तर आज त्यो संकलित पुस्तिका छैन र नहुनुको बिस्मात पनि ति सबै मुक्तक थिएनन् भनेर लिएको छैन । यस्ता मुक्तके टुक्राहरुलाई सायरी लेख्ने भन्थ्यौ हामी त्यो बेला र स्वरुपमा पनि अलि फरक हुन्थे । त्यो बेला कुनै केटिसाथीलाई चिढ्याउन लेखेको यो टुक्रा त म कहिल्यै बिर्षन्न -
चिठ्ठी त तिमीले लेखिछौ प्रिय
तर अक्षर हेर्दा रुन मन लाग्यो
गालामा म्वाईपनि खाईदियौ प्रिय
तर दाँतेगुहु सम्झेर धुन मन लाग्यो ।
पछि आएर मुक्तक लेख्नै छाडिएछ । कैलेकाँहि अरु ब्लगर साथीहरुको ब्लगमा मुक्तक देख्दा स्मरण हुन्थ्यो म पनि पहिले लेख्थें भन्ने र एकाध लेख्न रहर पनि लागेर आउंथ्यो । हो त्यस्तै रहर मेटाउन लेखेका थप केहि मुक्तकहरु पनि कम्प्युटरको कुनोमा फेलापारेपछि भने अन्तराल पछिको ब्लग लेख्न ढुक्क भएँ । अन्तराल पछिको लेखाईमा आफुलाई आनन्द यसकारण हुने भो कि मेरो ब्लग पढ्नुहुने पाठक मित्रहरुले अहिलेसम्म मेरो ब्लगमा मुक्तकको स्वाद लिनुभएकै छैन र यो ब्लगमा नयाँ हुने भयो । आउनुस् थप केहि 'मुक्तक'हरु पढेर स्वाद लिनुहोला र मुक्तक भए भएनन् पनि भन्दिनुहोला ।
सुन्थें चारैसुर तुनाले कसिएकि चोली हुन् तिनी
अप्ठ्यारोमा हुँदा म उनको सहारा बनें
अलि सजिलो के भयो म विचरा बनें
र ऐले उनकै सामु आफ्नो अस्तित्व खोज्दैछु
जहिले देखि म उनको दैनिक आहारा बनें ।
के जान्नु मायामा पनि अर्थोकै मिसा'को भए
बाहिर मुस्कुराउने मायालु भित्र रिसा'को भए
पत्तो पाउँदो हुँ कठै म सोझो मान्छेले पनि
सुकुमार जवानी उनको पारदर्शी सिसाको भए ।
देश अचेल हाक्पारे भाखामा हराएको छ
पिरती फुल्ने ति बनपाखामा हराएको छ
कहाँ खोज्ने हो कठै! अब मेरो देशलाई
यो सपना देख्ने प्रत्येक आँखामा हराएको छ ।
(कठै! देशको कुरापनि कोरिएको रहेछ मुक्तकमा)
गजल : के होस भन्ने चाहन्छौ
बुझ्न सकिंन तिमी के होस भन्ने चाहन्छौ ।
कि नबुझ्दै जिन्दगी बितोस भन्ने चाहन्छौ ।
खसालेर काँच जस्तै यो मन हातबाट,
मैले कुन चैं मन राखोस भन्ने चाहन्छौ ।
घटाई आफ्नै उचाई झुकाउने क्या कला,
कति घटि मलाई झुकोस भन्ने चाहन्छौ ।
किनारामा मन छोडी मान्छौ बाढिको डर,
कि भेलमा त्यो मनै बगोस भन्ने चाहन्छौ ।
प्रहार लगातार देख्दा लाग्छ यहि तिमी,
ब्लग लेखनको आफ्नो गतिसँग आफैं आजित भएको कुरापनि कति लेख्ने हो ब्लगमा । आजित माथि आजित भएपछि खास केहि नबोल्नु नै ठिक होला । तसर्थ यसपटक थपक्क यो गजल आफ्नो ब्लगको धुकधुकी चलेकै छ भन्ना खातिर ।
Posted by दीपक जडित at 5:02 AM6comments: Links to this post
कविता : गाइने किरा र म
खडेरीको संकेत गर्दैनन्
बादल नलागेको आकाश
झरी नपरेको दिन
त्यसैले प्रेम छ मलाई
यौटा सिँगो मान्छे
छरिएर सयौं गाइने किरामा
सानो आकाशमा वरपर
खेतमा जमेको पानी छुँदै
असारे वर्षातको संगीतमा
साउने हिलोको सुगन्धमा
भदौरे घामको चर्को रागमा
समाउन सकुँ आफैंलाई
रंगीन गाइने किरालाईझैं
आफ्नै जिन्दगीको चक्र ।
यो कविता पनि निरन्तरताको नाम भयो ब्लगलाई । एकदिन त्यसै गाइने किरा उड्यो मनमा र उडायो मलाई गाउँको खेतबारी सम्म । र गाइने किरालाई सम्बोधन गरेर केहि लेख्ने निश्चय भएर लेखें यो कविता ।
Posted by दीपक जडित at 8:19 PM2comments: Links to this post